Indawo yokubaleka yabucala kwindalo yaseSaaremaa - I-Airbnb
Indawo yokubaleka yabucala kwindalo yaseSaaremaa
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKrõõt
I-Saare Talu Puhkemaja yindawo efanelekileyo yokuphumla yabucala kubathandi bendalo. Ikhabhathi epholileyo eyi-36m2 kwindawo yolondolozo lwendalo, kufutshane nolwandle (150m). Isandi solwandle neentaka zolwandle, nezilwanyana zasendle ezidlulayo ukuze zibonakale kwabo banokubona. Ikhabhinethi yethu ifanelekile kwiintsapho ezihamba nabantwana okanye kubantu abadala abafuna ixesha elizolileyo phakathi kwendalo engonakaliswanga kunye nokuhamba ngeendlela zelali kunye neendlela zehlathi okanye ukuloba. I-Saaremaa yokwenyani kokona kulungileyo.
Ikhabhathi encinci eyakhiwe ngokwesiko enegumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi elincinci kumgangatho wokuqala kunye negumbi lokulala elivulekileyo kumgangatho wesibini. Indlu yokuhlambela encinci eneshawa kunye nendlu yangasese inika ubunewunewu phakathi kwendalo eluhlaza. Iimfuno zingahamba zilobe kwi-Kungla okanye ichweba laseTurja (izixhobo zokuloba azibonelelwanga). Ngexesha lehlobo lokuqubha kunye nokusefa okunokwenzeka. Ukuqubha ngezihlangu zokuqubha ezicetyiswayo njengoko umzantsi wolwandle unamatye amancinci. Iibhayisekile ezimbini zabantwana zinokuqeshwa ngentlawulo.
Izibuko zabalobi baseTurja kunye neKungla zikumgama wokuhamba nge-1 kunye ne-2 km. Ilali yaseTurja yilali yabalobi yeenkulungwane zakudala enezindlu zasefama zaseSaaremaa ezikufutshane. Yindawo efanelekileyo yokubalekela abantu ababuxabisayo ubomi belizwe, amahlathi kunye nobomi basendle.
Umbuki zindwendwe ngu- Krõõt
Umniniyo uhlala efumaneka ngefowuni ephathwayo okanye ngemiyalezo ebhaliweyo. Ukuba akakho ngokobuqu uncedo luya kubakho ukuba luyafuneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kallemäe